4 In. Centerset 2-Bata Bhegi Yekugezera
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW Chrome Bathroom Faucet Ine Drain Assembly
Rated 4.74 Kunze kwe5 yakavakirwa 23 kasitoma ratings
Kupa chimiro, kuita uye kugona, iyo yeowowfaucet muunganidzwa ndiyo yakanakira kamuri yekugezera. Yepamusoro yekuyerera muyero we1.2 g pamasekondi maviri zvichabatsira kuchengetedza mvura. Iyo ceramic disk valve cartridge inopa hupenyu hwekudonha-husina mashandiro, pamwe nesimbi yesimbi yekubatanidza dhidhi inoita kuti kuiswa kukurumidza kupfuura nakare kose. Chisarudzo chinotyisa chezuva nezuva chimbudzi isu
2321400C yekuraira mirairo
4 padiki Center Bhati Faucet 2321400C Kureba: 7.5 ″; Hunhu hweSpout: 4.4 ″; Hole Saizi: 25 - 38 mm1 - 1.5 ″
Chrome Vanity Bathroom Faucet: yakasvibirira chrome kupera, girazi-senge rinotaridzika rinotaridzika, rakakwanira kwemazuva ano yekushongedza yekushongedza, machesi imba yekubatira, condominium, furati, imba yekushambidzira, shambadziro yekutengesa, nzvimbo yekutandarira
Double Handle Basin Faucet: 2-inobata dhizaini, iri nyore kugadzirisa tembiricha uye vhoriyamu, Yakakwira arc spout inokupa iwe kukwana kwakakwana pasi pe spout.
Yepamusoro Hwepamusoro: NSF ceramic diski inova nechokwadi chekuburitsa, chinhu chakasimba (SS201, uye zinc simbi), ABS aerator inopa isina kunyorova uye zvinyoro nyoro kuyerera kwemvura.
SKU: 2321400C Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: drain musangano, yakapukutwa chrome, kuramba nzvimbo
Yakakura dhizaini, yakajeka uye yechizvino kutaridzika. Iyo yakakwira kukwira kwepombi inodzika kuyerera kwemarara nemba yekugeza maoko ako kana musoro.
Ingoshuva kuti vagadzire pombi yekunyura mukicheni mune imwechete dhizaini.
Bhegi rakakura uye mutengo. Nyore kuisa.
yakakwana yekugezera kwangu. Hapasisina kudonhedzaLooks classic. Inoshanda yakakura uye kubatidza mvura nyore uye kumeso.
Kugutsikana kwazvo nemutengo, mhando uye dhizaini, saka zvakauya nemhando yemapombi uye gurovhisi, ini ndichatora imwe yeimwe singi yangu yekugezera ikafa.
Saka tsvarakadenga, tanga tine dambudziko nekuisa iyo drain, asi kushandira vatengi kwaishamisa uye vakatibatsira ipapo ipapo!
Izvo zvaive zvisina kunyanya kuoma kuisa: nhanho-nhanho mirayiridzo yakajeka uye zvidimbu zvese zvinowirirana pamwe zvakanaka, zvinotaridzika uye zviri nyore kushandisa - kusiyana nemapombi ekare ataifanira kuona nekuda kwekuisa kwakashata uye ngura. Imba yatakatenga yaive nemadhishi madiki akanaka mubath bath; izvi hazvisi pamusoro zvakataurwa uye zvinokwana nzvimbo kwazvo.
Pombi yacho pachayo yakanaka. Ndingakurudzira kutenga nzungu dzakasiyana dzemupombi iyo yakapihwa inotyisa iyo haina shinda nyore nyore uye inobvisa kunyange nyore.
Isu tinoda kutaridzika kwechinhu ichi uye hunhu hwakavakirwa hwakatsiga pamutengo, asi dhayeti yedu haina kubata nemazvo ichiita kuti zvikone kuivhara uye kuzadza kuzere nemvura.
Zvakanakisa. Inotaridzika zvakanaka. Yakanaka bang yemari!
Faucet iri nyore kuisa uye inotaridzika zvakanaka! Iri ibasa rinorema pamutengo. Iyo pop-up yekumisa inyaya nyaya. Idiki, zvakanyanya mapurasitiki uye zvakaoma kwazvo kugadzirisa. Aifanirwa kutenga iri nani mhando uye kutsiva yaisanganisira dhureni.
Ini ndaida pombi yekugezera kwevakomana vangu uye iyi IT !! Izvo zvakanaka chaizvo. Inotendererawo, iyo yandakanga ndisingazive. Isu takangoiisa asi inoita kunge yakanaka mhando!
Kuisirwa kuri nyore uye zvakangofanana neDelta iyo yakatsiva. Inotaridzika kwazvo yepamusoro, kunyangwe yakawanda isina simbi pakuonekwa kupfuura brashi nickel
Inotaridzika uye yakagadzira yedu diki RV kunyura ZVINOSHANDISA zvakanyanya kushandiswa.
Yakavimbika huwandu uye yemazuva ano dhizaini yeiyi pombi. Yakakwana kukwana mumba yekugezera.
Tinoda pombi idzi
Shandisa yekugezera huru yekurara. Zviri nyore kuisa, ine mirayiridzo yakajeka. Inotaridzika zvakanaka negadziriro yekugezera.
Yakanga yakanaka kwazvo yakaiswa mumoms yangu yekugezera.
Ndinoda chitarisiko, chinotaridzika kupfuura zvazvinoita. Mumaoko acho anotsvedzerera. Iyo pop up drain inoshanda zvakanaka.
uyu wakanaka pombi iyo yakarumbidza imba yangu yekugezera yakanaka kwazvo yakagadzirirwa uye yakakosha pamutengo izvozvi ndakatenga wechipiri achifara nechigadzirwa ichi
Haisi chete iyi yemamwe mapombi akanaka kwazvo andakave nawo, murume wangu akati zvaive nyore kuisa uye iwo maficha ari sekushambadzwa. Mutengesi wepombi aive nechigadzirwa kwatiri munguva yekurekodha uye anga achinyatsoteerera. Kwete chete kuti ndiri muridzi wemba, ndiri zvakare Realtor. Ndingakurudzira chigadzirwa ichi uye mutengesi kune chero shamwari dzangu nevatengi vezvivakwa.
Kutenda nebasa rakakura revatengi uye chigadzirwa chinonakidza!
Ini ndanga ndisiri kutarisira pombi yemhando iyi yeiyi mutengo wemutengo. Ini ndakanga ndisati ndambonzwa nezve ichi chiratidzo pamberi, uye ndakafadzwa kwazvo nehunhu pakasvika izvi. Zvese zvikamu zvendarira mukati, zvinorema kwazvo, hapana mapurasitiki, zviri nyore kuisa, kunyangwe chikamu chedrain chakanyatsogadzirwa. Iko bhatani bhatani kuti ushande. Icho chikamu chakaomesesa chaive kutora girare rekare. Murume wangu haasi murume anobatsira-murume uye akaburitsa yekare, iyo nyowani mukati uye zvese zvakaiswa mukati meisingasviki awa. Uye chikamu chakanakisa – hapachina pombi inodonha !! Haugone kumirira kuti ndione yangu inotevera yemvura bhiri!